Kulamba abasebenzi ngomgwaqo | News24
Kulamba abasebenzi ngomgwaqo
ISITHOMBE:nompendulo ngubane Umgwaqo uThwala okumanje ubhekene nezinkinga zokungabi khona kwezinsiza kusebenza.
UKUSWELEKA kwezinto zokwakha umgwaqo uThwala onwetshwayo ukuze ube nemizila emithathu e-Mbali Unit 2 sekuholele ekutheni kume.
Lezi zindaba ezimbi futhi ezifakazelwe umxhumanisi womphakathi uMnu Themba Zondi, zilambisa abasebenzi abalingaliselwa emashumini ayisikhombisa.
Lo mgwaqo bekubhekeke ukuthi uphele ngenyanga uNdasa (March). Kuzokhumbuleka ukuthi kuke kwaba nokunganami okuvezwe amanye amalungu omphakathi nosomabhizinisi mayelana nokwakhiwa kwalo mgwaqo.
Lo mgwaqo ukulungiswa kwawo kuyoze kufinyelele enxanxatheleni yezitolo iGreater Edendale Mall.
Ekhuluma ne-Echo, uZondi uthe okunye okwenza kube khona izinkinga ukungenami kwabasebenzi mayelana nemali abayitholayo njengoba kubuye kube nezinsuku abangazisebenzi ngenxa yokungabi khona khona kwezinto zokwakha.
“Lokhu kushoda kwezinto zokwakha sekuholele ekutheni abasebenzi bafike beze emsebenzini kodwa bazithole sebebuyela emuva. Abantu okuyibona abadala ukuthi kube nezinxushunxushu ilaba benkontilaki okumele babhekelele ukuthi zonke izinto eziphathelene nokwakhiwa komgwaqo zikhona.
“Ukushoda kwazo yikho-ke manje okudala ukuthi abasebenzi bangasebenzi ngezinye izinsuku. Namhlanje (Ngolwesibili) kuphoqelekile ukuthi abasenzi babuyele emakhaya. Okwanamhlanje kubala nokungagculiseki kwabasebenzi mayelana neholo abalitholile,” kuchaza uZondi.
Omunye wabasebenzi ongazange athande ukudalulwa uthe imali abayiholayo u-R4 000 ngenyanga. Uthe kule nyanga uNhlangulana bahole imali engango R2 000 lokho okungazange kubanelise kanti futhi wabalula sekungamasonto amathathu izinto zokwakha zingekho.
“Lokhu okusilona iphutha lethu kodwa inkontileka okuyiyona engathengi izinto zokwakha zonke ukuze umsebenzi uqhubeke. Ngesinye isikhathi siye sisebenze amahora angaphelele kulawa esiwasebenzayo. Umthelela walokho kuba ukuthi ngeke sihole uma singazange sisebenze amahora aphelele.
“Lokho-ke kuyiphutha lenkontileka, hhayi thina njengabasebenzi. Kodwa-ke sigcina sesichaphazeleka. Asineme ngendlela umqashi wethi wenkontileka asiphethe ngayo. Unendlela yakhe yokuphatha abantu engeyinhle kanti nalokho siyakhala ngakho singabasebenzi,” kusho lo msebenzi.
Iphephandaba i-Echo lizame isikhathi eziningi ukuxhumana nomphathi kule project uMnu Kenneth Kasumba kodwa kwanhlanga zimuka nomoya. Ucingo lwakhe belungangeni kanti akazange avume ukukhuluma nentatheli ngesikhathi ivakashele le ndawo ye project.
Ikhansela laka-ward 22 le ndawo engaphansi kwalo, uMnu Pat Jaca, uthe uyazi nezinkinga zenkontileka ezikhona kanye nokukhalaza kwabasebenzi.
Uthe abantu abenza kube nezinxushunxushu inkontileka engathengi izinto zokwakha.
“Kunezinye izinkinga zamaholo abasebenzi abangeneme ngazo. Akukho msebenzi owabizwa watshelwa ngoshintsho emaholweni abo, yingakho nje kunezinkinga ezikhona.
“Nami njengekhansela angizange ngibizwe ngitshelwe ukuthi kuzoba noshintsho mayelana nezimali zabasebenzi,”kubeka uJaca.
UZondi uqhube wathi kuzoba nezingxoxo phakathi komqashi nabasebenzi ukuzama ukuxazulula izinkinga.
“Okwamanje kodwa abasebenzi baphindele emakhaya,” kusho uZondi.
Bathi abasebenzi bafike beze emsebenzini kodwa bazithole sebebuyela emuva ngokushoda kwezidingo
Men accused of killing Coligny teen go on trial next year